दुध उत्पादनमा सफल कसरी बन्ने ? – कृषक र प्रविधि
दुध उत्पादनमा सफल कसरी बन्ने ?
बिभिन्न प्राकृतिक प्रकोपमा सबभन्दा बढी समस्यामा पर्ने उत्पादन गर्ने उद्यमी नै हुन्छन् । ती उद्यमीमा पनि अ
दुध उत्पादन व्यवसायमा आबद्ध कृषकहरु समस्यामा छन् । पशुको लागी आवश्यक दाना, औषधि उपचार, श्रमको ज्याला जुन हिसाबले बढ्दै गएको त्यसको तुलनामा दुधको मूल्य नपाउदा समस्यामा छन् । यसको साथै व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण पनि धेरै किसानहरु समस्यामा छन् । यसै कुरालाई आधार मानेर सफल दुध उत्पादक बन्न के गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सबैभन्दा पहिला दुध उत्पादनका लागि गरिने गाई तथा भैँसीपालनलाई पनि अन्य सामान तथा वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सगँ तुलना गर्नु पर्दछ । उद्योगहरु जहिले पनि गुणस्तरमा कटौती नगरी उत्पादन लागत मूल्य कटाउने उपायको खोजीमा हुन्छन । दुध उत्पादन गर्ने व्यवसायमा पनियो नीति नै अवलम्वन गर्नु पर्दछ । तपाईले जतिकम लागतमा दुध उत्पादन गर्न सक्नु हुन्छ त्यति नै तपाईको व्यवसाय नाफामा जान्छ । तसर्थ अत्यावश्यक बाहेकका अन्य कुरामा खर्च गर्नु हुन्न र खर्च कटौती गर्न सक्ने ठाउँहरुको नियमित अध्ययन गर्नु पर्दछ ।
तपाई व्यवसायमा सफल वा असफल व्यवसायको आकार भन्दा तपाईसँग भएको श्रोत तथा साधनको अधिकतम उपयोगले निर्धारण गर्दछ । तसर्थ भएको श्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग हुने गरि व्यवसाय संचालन गर्नु पर्दछ । उदाहरणको लागी घाँस काट्ने मेसिन वा दुध दुहुने मेसिन खरिद गर्नु भएको छ भने त्यसको उच्चतम प्रयोग हुने गरि काम गर्नु पर्दछ । यदि तपाईसँग ५० माउ भन्दा कम गाई छ भने कम भन्दा कम पुँजी कसरी व्यवसाय संञ्चालन गर्ने, परिवारको सदस्यहरुको सहयोगमा श्रमिक बिना कसरी काम गर्ने , गोठ तथा अन्य संरचनामा धेरै लगानी नगर्ने जस्ता कुराको विकास गर्नु पर्दछ । ५० वटा देखि १ सय वटा सम्म पशुपालनमा संचालनको हिसाबले खासै फरक नपर्ने भएको हुदाँ व्यवसायलाई नाफामा लैजान कि त ५० भन्दा कम वा सय भन्दा बढि गाई पालन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
राम्रो व्यवस्थापकले कसरी बढी भन्दा बढी दुध उत्पादन गर्ने भनेर सोच्नुपर्दछ । राम्रो जातको बढी दुध दिने पशुहरु मात्र पालन गर्नु पर्दछ । दुध कम दिने तथा रोगी पशुलाई बेचेर भए पनि बढि दुध दिने उच्च नश्लका पशुपालन गर्नु पर्दछ । हाम्रो धार्मिक मान्यता अनुसार गाई बेच्न नहुने जस्ता कुराहरु आउन सक्छन तर तपाईले के बुझन जरुरी छ भने तपाईको व्यवसाय डुब्यो र टाट पल्टनु भयो भने आहो यो त गाई पाल्ने मानिस हो भनेर तपाईलाइृ सहयोग गर्न कोह िपनि आउदैनन् ।
हामी कर्मचारी राख्न हतार मान्छौ । जब कर्मचारी राख्छौ त्यसपछि तलब दिन सुरु गर्नुपर्दछ । तर्सथ उत्पादनको अवस्था र बिक्री परिमाणनको आधारमा मात्र श्रमिक राख्नुपर्दछ । यदि दुध दिने पशु कम छ भने श्रमिकलाई कि त विदा दिनु पदृछ वा अन्य केह िकामको श्रृजना गर्नु पर्दछ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा संचालकहरुले नै आफै सक्रिय रुपमा काम गर्नु पर्दछ । यो संसारभर चलेको छ ।
धेरै पटक देखाउन वा अनुदानकालागि गोठमा बढी लगानी गर्ने गरेको पाईन्छ । स्मरण रहोस गोठमा १ रुपैँया पनि आम्दानी दिदैन । बढि अनुदान लिनलाई तपाईले पनि आफनो हिस्सामा बढि लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ ।उत्पादन नदिने श्रोतमा शुरवातमा धेरै लगानी गर्दा प्रतिफल वा लगानी उठाउने समस्या अवधी बढ्न जान्छ । यसले व्यवसायीलाई निरास पनि बनाउन सक्छ । हाल नेपालमा दुध उत्पादन गर्ने फार्महरुमा बढी लगानी भएको अवस्था छ । अनुदानको चक्करमा अनुपयोग हुने श्रोतमा अनावश्यक लगानी भएकोले व्याज, किस्ता तिर्न पनि हम्मे हम्मे छ , अनावश्यक चीजमा लगानी गर्नु नै हुदैँन ।
विभिन्न समयमा व्यवसायमा नसोचिएको समस्याहरु आई पर्दछन् । जस्तो कि पुरै रोगको महामरी , र्फाममा आगलागी, बाढी पहिरो आदि । त्यसैले यस्तो काबु बाहिरको परिस्थितीको जोखिमको न्यूनीकरण गर्न बिमा अनिवार्य गर्नु पर्दछ । कथमकदाचित त्यस्तो भई हालमा बीमाबाट पाएको क्षतिपूर्तिले तपाईको व्यवसायलाई पूर्न संचालनमा ल्याउन सहज हुन्छ ।